Madaxweynihii hore kooxda Real Madrid oo ku qeexay iibka Cristiano Ronaldo go’aan doqonimo ah – Gool FM
(Real Madrid) 18 Okt 2018. Madaxweynihii hore kooxda Real Madrid Ramón Calderón ayaa ku qeexay go’aankii Cristiano Ronaldo looga iibiyay kooxda reer Talyaaniga ee Juventus suuqii xagaaga ee lasoo dhaafay inuu ahaa mid nacasnimo ah.
Ramón Calderón ayaa wuxuu madaxweyne kasoo ahaa kooxda Real Madrid inta u dhexeesay 2006 ilaa iyo 2009, wuxuuna wareysi uu ku bixiyay “El Mundo Deportivo” ku sheegay sida ay Real Madrid ugu qaldan tahay iibka Cristiano Ronaldo.
“Cristiano Ronaldo waa hogaamiye, Juventus waa koox nasiib badan, waxay gaareen go’aan aad u wanaagsan kadib markii ay sameeyeen saxiixiisa”.
“Ma go’aamin kartid qiimaha dhabta ah ee Cristiano Ronaldo, sababtoo ah waa ciyaaryahan xili ciyaareedkii kuu dhalinaya ilaa iyo 50 gool, taasoo ah waxa Real Madrid ka maqan xiligan”.
“Real Madrid waxay ka war qabtay in marka uu ku gudi jiro garoonka Cristiano in kooxda ay gool dhalin karto, sidaas darteed iibintiisa waxay ahayd go’aan nacasnimo ah”.
“Laakiin uma maleenayo in awooda ay ku lahayd Real Madrid kubada cagta ee qaarada yurub inay halkaa kusoo idlaatay”.
Waxaa xusid mudan in Real Madrid ay dhawaanahan soo gaartay natiijooyin xumi kulamadii ay kasoo ciyaareen tartamada kala duwan iyo qaarada Yurub.